ထရိတ်ဒင်း ခွဲဖြာထွက်ခြင်းက ထရိတ်ဒင်းလုပ်ရင် ကောင်းမွန်တဲ့ အချက်ပြ signal ကိုရယူဖို့ အသုံးပြုတဲ့ အတွေးအခေါ်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်. စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာက oscillator တိုင်းတာကိရိယာတွေရဲ့ နောက်ကျနေသလားဆိုတာက ထိုခွဲဖြာမှုရဲ့ တိကျမှုကိုဆုံးဖြတ်ပေးပါတယ်.
ထရိတ်ဒါတွေက ဒီခွဲဖြာခြင်းကို ဗျူဟာကျကျအသုံးချပါတယ်. တချို့သူတွေက အကျိုးရနိုင်မဲ့ entry အဝင် point တွေကိုသိဖို့အသုံးချကြပါတယ်. တခြားသူတွေကတော့ သူတို့ရဲ့ position တွေဆက်ထားဖို့ အချိန်သတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာသုံးပါတယ်. ယခု ထိုပုံစံတွေကနေ အချက်အလက်ကိုသိအောင် နဲ့ ထရိတ်လုပ်ဖို့အတွက်ပြောပြပေးသွားမှာပါ.
Divergence: ခွဲဖြာခြင်း၏ ဆိုလိုရင်း
Divergence ခွဲဖြာခြင်းက ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာနဲ့ စကြည့်ရအောင်. အခြေခံအားဖြင့်ပြောရရင် divergence ဆိုတာ သင်ဈေးကွက်ကို ဆန်းစစ်ဖို့ အသုံးပြုနေတဲ့ price chart ဈေးနှုန်းပြဇယားနဲ့ technical indicator တွေက ဆန့်ကျင်ဘက် ဦးတည်ချက်ကိုသွားတာကို ပြောတာပါ. Chart ဇယားမှာ တစ်ခုခုဖြစ်နေပြီဆိုတာလေး သင်သိဖို့ သူကသင့်ကို အချက်ပြပေးပါတယ်.
Divergence က အတက်ကော အကျကော ဖြစ်နိုင်ပါတယ်.
အကျ divergence ဟာ ဈေးနှုန်းက high မြင့်မြင့် ကိုဖန်တီးပြီး indicator အင်တီကေတာ က high နိမ့်နိမ့် ကိုဖန်တီးတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်ပါတယ်. ထိုအကျ divergence ပြီးရင် ဈေးကအောက်ကိုရွေ့ပါတယ်. ဈေးနှုန်းက အောက်ကျလားဆိုတာ indicator နဲ့ ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်.
အတက် divergence ခေါ် convergence ဟာ ဈေးနှုန်းက low နိမ့်နိမ့် နဲ့ indicator က low မြင့်မြင့်ပြတဲ့အခါ ဖြစ်ပေါ်ပါတယ်. ဒါကနေ ဈေးနှုန်းတက်ဖို့ပြပါတော့မယ်. Indicator နဲ့ ကြည့်ဖို့တော့ လိုအပ်ပါတယ်.
တစ်ခုမှတ်ထားဖို့က အကျ divergence တွေအကြောင်းပြောရင် ဇယားမှာ high တွေကို ကြည့်ပါတယ်. အတက် divergence ဆိုရင် low တွေကိုကြည့်ပါတယ်.
သမရိုးကျ divergence အပြင် hidden ပုန်းကွယ်နေတဲ့ divergence လဲရှိပါတယ်.
ပုန်းကွယ် အကျ divergence ဟာ ဈေးနှုန်းက high နိမ့်နိမ့် ကိုပြပြီး indicator က high မြင့်မြင့် ကိုပြတဲ့အခါမှာ ဖြစ်ပေါ်ပါတယ်. High အသစ်ထပ်ဖြစ်တာတွေမရှိရင် bull အတက်တွေက အားလျော့လာနေပြီဆိုတာပြပါတယ်. High မြင့်မြင့် ကိုပြနေပေမဲ့ လားရာက သူလာရာလမ်းကြောင်းပုံအတိုင်း သွားနိုင်ပါတယ်. ဒါက level မြင့်မြင့်မှာရောင်းဖို့အတွက်အခွင့်ကောင်းပါပဲ.
အပုန်း အတက် divergence ဟာ ဈေးနှုန်းက low မြင့်မြင့် ကိုပြပြီး indicator က low နိမ့်နိမ့် ကိုပြတဲ့အခါမှာ ဖြစ်ပေါ်ပါတယ်. Low အသစ်ထပ်ဖြစ်တာတွေမရှိရင် bear အကျတွေက အားလျော့လာနေပြီဆိုတာပြပါတယ်. Low နိမ့်နိမ့်ကိုပြနေပေမဲ့ လားရာက သူလာရာလမ်းကြောင်းပုံအတိုင်း သွားနိုင်ပါတယ်. ဒါက level နိမ့်နိမ့်မှာဝယ်ဖို့အတွက်အခွင့်ကောင်းပါပဲ.
ဒီပုန်းကွယ်နေတဲ့ divergence တွေကိုရှာရတာခက်ပါတယ်.
ဂန္တဝင်: ပြောင်းပြန်ဖြစ်မှုကို မျော်လင့်ခြင်း
Downside အောက်ကျသွားနိုင်မဲ့ အလားအလာ
Upside အပေါ်တတ်သွားနိုင်မဲ့ အလားအလာ
Hidden ပုန်းကွယ်မှု: အမှန်ပြင်မှု နှင့် တဆက်တည်းဖြစ်ခြင်းကို မျော်လင့်ခြင်း
Divergence တွေကို ဈေးနှုန်း ပြောင်းပြန်ဖြစ်မှုတွေ အမှန်ပြန်ပြင်မှုတွေကို ခန့်မှန်းတဲ့အခါ ပုံမှန်အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်. သူတို့ဟာ တကယ့်ဈေးမဖြစ်ခင်မှာ ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိပါတယ်. ဒါက ထရိတ်ဒါတွေအတွက် ဈေးနှုန်းစရွေ့တာကနေ ထရိတ်နိုင်ဖို့ အရမ်းကိုအထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်.
ဂန္တဝင် divergence ကနေ ဘယ်လိုထရိတ်လုပ်မလဲ
ထိုလို ထရိတ်ဖို့အတွက် Stochastic, Relative Strength Index (RSI) သို့မဟုတ် Moving Average Convergence Divergence (MACD) တစ်ခုခုကို chart ဇယားထဲမှာထည့်ရပါမယ်.
သင်ထရိတ်မလုပ်ခင် ဘယ် indicator သုံးသုံး stop loss သတ်မှတ်ဖို့သင့်ကို အထူးအကြံပေးချင်ပါတယ်. Divergence မှာလည်းထိုနည်း၎င်း ပါပဲ. အကျ divergence ရှိပြီဆိုတာသိရင် stop loss ကို ဇယားရဲ့ နောက်ဆုံး top မှာ ထားနိုင်ပါတယ်. Divergence က အတက် ဆိုရင် သင်ဟာ stop loss ကို chart မှာ နောက်ဆုံးသော bottom မှာထားနိုင်ပါတယ်.
သင်က RSI နဲ့ Stochastic နဲ့ ထရိတ်ရင် take profit ကိုသတ်မှတ်ဖို့ indicator နောက်တစ်ခုထပ်သုံးဖို့လိုပါမယ်. Swing analysis သို့မဟုတ် support/resistance level ကိုအသုံးပြုပြီး take profit ကိုသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်. သင်က divergence နဲ့ ထရိတ်ဒင်းလုပ်တဲ့အခါ MACD ကိုကြိုက်နှစ်သက်မယ်ဆို တခြားဟာတွေ သုံးဖို့မလိုတော့ပါဘူး. MACD histogram ဇယားက signal line ကို ဇောက်ထိုးဖြတ်တဲ့အခါ အတက် position ကိုပိတ်ဖို့ signal အချက်ပြနေတာပါ. MACD histogram ဇယားက signal line ကို အောက်ကနေထိုးဖောက်ဖြတ်တဲ့အခါ အကျ position ကိုပိတ်ဖို့ signal အချက်ပြနေတာပါ.
ဒါကတော့ divergence ထရိတ်ကို MACD အသုံးပြုထားတာရဲ့ ဥပမာပါ.
သင်က MACD နဲ့ ဈေးနှုန်းပြဇယားတို့ကြားမှာ အတက် divergence (convergence) ကို တွေ့တယ် ဆိုပါစို့. ဒါ့အပြင် အတက်ကဖြတ်တက်နေတာကို MACD မှာတွေ့တယ်ပေါ့. ဒီ ဈေးနှုန်းပြ divergence ကို long position ဖွင့်ဖို့ အချက်ပြအနေနဲ့ သုံးလိုက်တာပါ. နောက်ဆုံး bottom ဈေးရဲ့အောက်မှာ stop loss ကိုထားသင့်ပါတယ်. MACD မှာ အကျ ဖြတ်ဆင်းမှုတွေ့တယ်ဆိုရင် trade ကိုပိတ်လိုက်ပါ.